Inqubomgomo Yewaranti Yokubonisa i-YONWAYTECH - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
Inqubomgomo Yewaranti Yokubonisa i-YONWAYTECH
Inqubomgomo Yewaranti Yokubonisa i-YONWAYTECH:
1; Ububanzi bewaranti
Le Nqubomgomo yewaranti isebenza kwimikhiqizo yokubonisa ye-LED (ngemuva kwalokhu ezobizwa ngokuthi “Imikhiqizo”) ethengwe ngqo kwaShenzhen Yonwaytech Co., Ltd. (ngemuva kwalokhu ezobizwa nge- “Yonwaytech”) kanye nangesikhathi sewaranti.
Noma imiphi imikhiqizo engathengwanga ngqo kwaYonwaytech ayisebenzi kule Nqubomgomo yesiqinisekiso.
2; Isikhathi Sesiqinisekiso
Isikhathi sewaranti sizohambisana nenkontileka ethile yokuthengisa noma i-PI egunyaziwe. Sicela uqinisekise ukuthi ikhadi lewaranti noma amanye amadokhumenti avumelekile agcinwa kahle.
3; Isevisi yesiqinisekiso
Imikhiqizo izofakwa futhi isetshenziswe iqondiswe ngokuqinile neMiyalo Yokufaka kanye Nezixwayiso Zokusetshenziswa okushiwo ebhukwini lomkhiqizo. Uma Imikhiqizo inamaphutha ekhwalithi, okokusebenza, kanye nokukhiqiza ngesikhathi sokusetshenziswa okujwayelekile, i-Yonwaytech inikeza insizakalo yewaranti yemikhiqizo ngaphansi kwale nqubomgomo yesiqinisekiso.
4; Izinhlobo Zesevisi Yesiqinisekiso
4.1 Isevisi yezobuchwepheshe eku-inthanethi ekude ekude
Umhlahlandlela wobuchwepheshe obukude obuhlinzekwa ngamathuluzi wokuthumela imiyalezo njengocingo, imeyili, nezinye izindlela zokusiza ukuxazulula izinkinga zobuchwepheshe ezilula nezivamile. Le sevisi isebenza ezinkingeni zobuchwepheshe kufaka phakathi kepha kungakhawulelwe ekukhishweni kwekhebula lesiginali nekhebula lamandla, ukukhishwa kwesoftware yohlelo lokusetshenziswa kwesoftware namasethingi wepharamitha, nokukhishwa kwemodyuli, ukunikezwa kwamandla, ikhadi lesistimu, njll.
4.2 Buyela Ensizakalweni Yokulungisa Amafekthri
a) Ngezinkinga zemikhiqizo ezingenakuxazululwa ngesevisi ekude eku-inthanethi, i-Yonwaytech izoqinisekisa namakhasimende ukuthi angaphindisela yini ukubuyela kwinsizakalo yokulungisa ifektri.
b) Uma kudingeka umsebenzi wokulungisa ifektri, ikhasimende lizothwala imithwalo, umshuwalense, imali ekhokhwayo kanye nemvume yamasiko yokubuyisa ukulethwa kwemikhiqizo ebuyisiwe noma izingxenye zayo esiteshini senkonzo saseYonwaytech. Futhi i-Yonwaytech izothumela emuva imikhiqizo elungisiwe noma izingxenye zayo kumakhasimende futhi ithwala kuphela indlela eyodwa.
c) I-Yonwaytech izokwenqaba ukulethwa okungagunyaziwe ngembuyiselo lapho ifika futhi ngeke ibe nesibopho sanoma yiziphi izimali ezikhokhwayo nezimali zokuthola imvume yangokwezifiso. AbakwaYonwaytech ngeke bathweswe icala nganoma yikuphi ukukhubazeka, ukulimala noma ukulahleka kwemikhiqizo elungisiwe noma izingxenye ngenxa yokuhamba noma iphakethe elingalungile
4.3 Nikela Ngesevisi Yonjiniyela Esizeni Sezinkinga Zekhwalithi
a) Uma kunenkinga yekhwalithi edalwe ngumkhiqizo uqobo, futhi i-Yonwaytech ikholelwa ukuthi isimo siyadingeka, kuzonikezwa insizakalo yonjiniyela esizeni.
b) Kulokhu, ikhasimende lizohlinzeka ngombiko wephutha ku-Yonwaytech ngokufaka isicelo sesevisi esizeni. Okuqukethwe kombiko wephutha kuzofaka kepha kungagcini ezithombeni, kumavidiyo, kwinani lamaphutha, njll., Ukuze i-Yonwaytech ikwazi ukukhipha isinqumo sokuqala. Uma inkinga yekhwalithi ingamboziwe yile Nqubomgomo Yewaranti ngemuva kophenyo olwenziwa esizeni ngonjiniyela weYonwaytech, ikhasimende lizokhokha izindleko zokuhamba nezindleko zensizakalo yezobuchwepheshe njengenkontileka yokuthengisa noma iPI egunyaziwe.
c) Izingxenye ezinamaphutha ezithathelwe indawo onjiniyela besiza bakaYonwaytech kuzoba ngeyaseYonwaytech.